Ogaden News Agency (ONA) – AUN Faadumo Xassan Bide Waxay Ahayd Saldhigga Ururadii Bulshada Ogadenya – XaajiBisle
AUN Faadumo Xassan Bide Waxay Ahayd Saldhigga Ururadii Bulshada Ogadenya – XaajiBisle
Waxaa xijaabatay marxuumad (Inshaa Alaah) Fadumo Xassan Bidde Khalaf oo ahayd hooyadii hormuudka u ahayd aasaaskii JWXO, ayadoo kaalin wayn ka qaadatay halgamadii ka horeeyay. Waxaan Eebe uga baryaayaa marxuumadda inuu jannadii Fardowsa ka waraabiyo. Dhammanteen oo ehel uwada ah marxuumaddana samir iyo iiman inaga siiyo.
Eeddo Fadumo Xassan Bide waxay ku dhalatay Gobalka Qoraxay oo ay ku nolayd ilaa ay ka gaadhay shan sano. Wakhtigaas oo ahaa markii u geeriyoodey aabaheed Xassan Bide Khalaf. Waxay ugu yarayd dhamaan caruurtii u dhalay Xassan Bide Khalaf,kadib waxay eeddo Fadumo iyo hooyadeed Xadiyo Sh.Cabdille Xassan oo ahayd Sayid Maxamed Cabdille Xassan waalaashii, ay u wareegeen magalada Qalaafe,Ogadenia, halkaas oo ay ku barbaartay una reer yeelatay Allaha ha u naxariisto Gen. Adan Jamac (Cirdey) . Kadib waxay u soo waregeen dhamaan qoyskeedii dalka Somalia magalada Xamar oo ay ku qadaatay noolasheeda intii badnayd.
Waxay soo gashay dalka Canada 1991 kii kadib waxay u soo wareegtay dalka Mareykanka oo ay ku nolayd magalada Minneapolis ee gobalka Minnessota oo ay ku geeriyootay maalinti khamiista ee bisha April,30ka ahayd. Waxay ku geeriyootay ilaa 75 sano qiyaastii.
Waxay Allaha u naxariistee Faduma Xassan Bide kaga tagtay adduunka saddex wiil iyo ubadkoodii. Waxay ahayd halgamaa kasoo jeeda qoys halgan,waxayna dhalatay kadib markii aabaheed Xassan Bide laga soo daayey xabsiga gumeysiga Itoobia oo u ku xidhnaa muddo 10 sano gaadhaysa.
Waxaa galay dareen halgan kadib markii walaalkeed Xirsi Xassan Bide uu ku geeriyooday dagaalkii gobanimodoonka ahaa ee cadowga Itoobiya lagula jirey,halkaas oo ay ku noqotay hormuudki iyo hooyadii halganka.
Marxuumadda oo Gurigeedu ahaa goobtii saldhigga 1aad u ahaa masuulintii JWXO u horaysay ee Somalia ka halgamaysay. Waxay madax u ahayd masuulintii Ururka haweenka ee barnaamijka JWXO aqabalay oo saldhiga u ahaa aasaaska JWXO. Ururka Haweenka Somali-galbeed, Ururka Dhallinyarada Somali Galbeeed, Ururka Naftood-hureyaasha Somali galbeed iyo Ururka Shaqaalaha Somali-galbeed oo ku bahoobay Midowga Ururada Bulshada Somali Galbeed ayaa saldhig u ahaa, gundhigna u ahaa aasaaskii JWXO.